Kulanka caawa ee Chelsea iyo Barcelona - BBC News Somali
Chelsea ayaa ku guuleystay afar ka mid ah 12-kii ciyaarood ee ugu danbeeyey
Madaxa kooxda Chelsea Antonio Conte, ayaa sheegay in gogoshu dhinaciisa qaban waysay, maadaama uu ku dadaalayey dhankiisa u diyaar garowga ciyaar kamid ah tartanka Horyaalka Yurub ee 16-ka kooxood, oo ay isaga hor imanayaan garoonka ciyaaraha ee Stamford Bridge kooxaha Barcelona iyo Chelsea maanta ooTalaada ah.
Kooxda looggu yeero Buluuga ayaa ku guuleystay afar ka mid ah 12-kii ciyaarood ee ugu danbeeyey, ee tartamada ay ka qeyb gashey.
Kooxda Barcelona ayaa rajo weyn ka leh ciyaartan, mana laga guuleysan horyaalka La Liga ee dalka Spain illaa iyo haatan, iyadoo ku hoggaamineyso 7 dhibcood.
"Kooxdani, waa mid kamid ah kooxaha ugu wanaagsan adduunka - dabcan, way dhici kartaa iney kulankani ku guuleystaan," ayuu yiri Conte.
""Dhanka kale, waa ineynu xiiso kusoo dhaweynaa kulankani, maxaa yeelay waxaanu helnay fursad qaali ah, oo aan runtii la wadaageyno ciyaar adag kooxdan aan la loodin karin inta badan, iyo sidoo kale ineynu muujinno heerkeena awood ciyaareed," ayuu yiri macalinkan kasoo jeeda dalka Talyaaniga. "Waa ineynu isku daynaa ineynu soo bandhigno ciyaar mugleh oo dhameystiran," ayuu yiri.
Kooxda Chelsea ayaa ku guul dareysatey ciyaar ay isaga hor yimaadeen kooxda Arsenal bishii January rubuc-dhamaadkii koobka EFL, waxaa xigay guul darooyin kasoo wajahay ciyaaro ay isaga horyimaadeen Horyaalka Ingiriiska, gaar ahaan kooxaha Bournemouth iyo Watford`.
Markaa kadib, waxey bilaabeen iney boorka iska jafaan, oo ay qaabkii hore ee xumaa ee ay u dhaqmayeen dhanka kale ee wanaagsan u rogeen, iyagoo bilaabey iney tumaan ciyaar ay isaga horyimaadeen horyaalka Ingiriiska kooxda West Brom 12-kii Februarya, waxaa xigay jimcihii ina dhaaftey oo ay ka adkaatey kooxda Hull, wareega shanaad ee koobka FA-da.
Mustaqbalka Conte ayaa udub dhexaad u ahaa dooddo waa yadan socotey, iyadoo ciyaarta ay kooxdiisu la yeelanayaan kooxda Barcelona-na ay u tahay mid si weyn indhaha looggu hayo, iyo sidoo kale ciyaarta ay Manchester United kooxdu la yeelaneyso Axadda soo socota.
Kooxda Chelsea ayaa ka adkaatay Barcelona sanadkii 2012-kii afar dhamaadkii Horyaalka Yurub, iyagoo ugu danbeyntiina qaaday koobkaasi markii ugu horeysay.
Ninka dhanka dhibcaha gool dhalinta ku hoggaaminaya kooxda Barcelona, Lionel Messi, isagoo sidaa ah, haddana sideed kulan oo uu kasoo muuqday iyagoo la ciyaarayey kooxda buluuga wali muusan xaqiijin in gool uu ka dhaliyo.